Ithiyori Ebulalayo eyenziwe nguBarbara J Anderson (2011) - AmaPuzzle waseBeroean - Umbuyekezi weWebhu.org
Imfundiso Ebulalayo kaBarbara J Anderson (2011)
by Rufus | Apr 19, 2020 | Igazi, Izinguquko Ezisemfundweni, INdikimba Ebusayo, I-JW Doctrine, Izinqubomgomo ze-JW, JW.ORG | 4 amazwana
Kuyo yonke imibono eseqophelweni yoFakazi BakaJehova eheha ukunakwa kakhulu ukwenqatshelwa kwabo nokungqubuzana kokumpontshelwa kwegazi elibomvu — igazi-elinikelwe abantu abakhathalelayo ukusindisa izimpilo.
Ngenxa yokuthi iziguli ezidinga igazi ziyaqabukela zidinga zonke izingxenye zegazi lonke, ukwelashwa kwesimanje kudinga kuphela leyo ngxenye edingekayo esimweni esithile noma isifo, futhi lokhu kubizwa ngokuthi “ukwelashwa kwengxenye yegazi.”
Imininingwane elandelayo igxile kulokhu kwelashwa okusetshenziselwa ukusindisa izimpilo zoFakazi BakaJehova.
The 'Ukukhanya Kokuphila' futhi “Ukuphefumula Kokuphila”
Yize imizimba yethu izungezwe futhi igcotshwe umoya-mpilo, ukuphefumula umoya-mpilo bekungeke kusekele impilo yethu ukube bekungengenxa yegazi lethu ngenxa yokuthi umsebenzi obalulekile wegazi ukukhipha umoya-mpilo emaphashini uwuthuthise emzimbeni wonke. Ngaphandle kwegazi elishaywe yinhliziyo futhi lisakazwa emzimbeni wonke ngemithambo yemithambo, ngemithambo, nangama-capillaries, ngamakhono alo athwala umoya-mpilo, sasingakwazi ukuphila. Ngakho-ke, igazi aliyona kuphela i “Uketshezi lokuphila,” kepha ngokwesiko, kubhekwe njenge “Umoya wokuphila.”
The “Izithelo Zomkhuhlane Wokuphila”
Imikhiqizo yegazi (izingxenyana) kungashiwo ukuthi "Izithelo 'zamanzi okuphila'” ngoba imikhiqizo evela egazini isetshenziswa njenge imithi esindisa impilo.
Ngaphambi kuka-1945, oFakazi BakaJehova babevunyelwe ukwamukela ukumpontshelwa igazi nayo yonke imikhiqizo yegazi. Kwathi ngo-1945, izingcucu zegazi lonke nezezimali zavalwa ngokusemthethweni ukuthi zisetshenziswe oFakazi BakaJehova.
Ka-January 8, 1954 I-Phaphama! k. 24, ibonisa inkinga:
… Kuthatha amapintshisi owodwa neyesithathu egazi lonke ukuze kwanele amaprotheni egazi noma “ingxenyenamba” eyaziwa ngokuthi i-gamma globulin ngomjovo owodwa… ukwenziwa kwawo lonke igazi kuyibeka esigabeni esifanayo nokumpontshelwa igazi kuze kwenqatshelwe ukwenqatshelwa kukaJehova kokuthatha igazi ohlelweni kuyathinteka.
Ngo-1958, amasamu wegazi anjenge-diphtheria antitoxin ne-gamma globulin avunyelwa njengendaba yokwahlulela komuntu. Kepha lowo mbono uzoshintsha ezinye izikhathi eziningi.
Kepha ukwenqatshelwa kwegazi bekungekho ukujeziswa kuze kube ngu-1961 lapho kususwa ekuhlanganyeleni nasekugwebeni.
Akukho lutho olucace kakhulu ukwedlula ngonyaka we-1961 lapho kwacaciswa ngokusobala ukuthi ukuvinjelwa kwegazi kusebenza kuwo wonke amagazi nezakhi zegazi ezinjengezingxenyana zegazi ne-hemoglobin.
Uma unesizathu sokukholelwa ukuthi umkhiqizo othile uqukethe igazi noma ingxenye yegazi… uma ilebula lithi amaphilisi athile aqukethe i-hemoglobin… lokhu kuvela egazini… umKristu uyazi, ngaphandle kokubuza, ukuthi kufanele agweme ukulungiswa okunjalo.
Ukuvinjelwa kwegazi kwaqhubeka (yize ngo-1978 ama-hemophiliacs afunda ngokusemthethweni ukuthi ayakwamukela ukwelashwa ngezakhi zegazi) kuze kube ngu-1982 lapho abaholi abangoFakazi bethula imfundiso yabo yalokho abakubiza ngokuthi, izingxenye ezinkulu noma ezincane zegazi noma imikhiqizo. Ukusetshenziswa kwegama elithi “omncane” uma kubhekiselwa kwezinye izingxenye zegazi kunokuthile okuchazwa ngokuthi yimizuzu noma inani elingabalulekile okufanele libhekwe njengokuqanjwa okungafanele noma ukubiza okungafanele uma kuhlobene nale ndaba.
Imikhiqizo emincane yavunyelwa, emikhulu yaqatshelwa. Ababizwa ngokuthi abakhulu, abane babo, abasavinjelwe kuze kube namuhla, badilizwa ngaphansi kwesigama soFakazi njenge-plasma, amangqamuzana abomvu namhlophe egazi, nama-platelet. OFakazi bayenqaba ngokungananazi igazi eliphelele, amangqamuzana abomvu egazi, i-plasma rich plasma (PRP), okuyiwo wonke amangqamuzana egazi abomvu, amaplatelet, neplasma efriziwe (FFP) entsha. (NgoJuni 2000, inkambiso ka-1990 yokuvunyelwa kwezingxenyana yathathelwa indawo. Igazi labe selihlukaniswa laba izingxenye ze- "Okuyinhloko" kanye "neSekondari")
OFakazi BakaJehova babheka ukuthi yiziphi izingxenye eziyikhulu zegazi ezahlukile kumbono owamukelwa kabanzi wochwepheshe bezokwelapha abathi igazi ngokuyinhloko liqukethe amaseli noketshezi (i-plasma).
Igazi liqukethe amaseli noketshezi (iplasma). Kunezinhlobo ezintathu zamangqamuzana egazi, okungukuthi amangqamuzana abomvu egazi (erythrocyte), amangqamuzana egazi amhlophe (leukocytes) namaplatelet (thrombocyte). Amangqamuzana egazi akhiqizwa emgqonyeni wethambo elibomvu, lapho akhishwa angena emfuleni wegazi. Engxenyeni ye-fluid egazini, ebizwa ngokuthi yi-plasma, amangqamuzana egazi ahanjiswa emzimbeni wonke. I-Plasma iqukethe izinhlobo eziningi ezihlukile zezindawo.
Ukuhlukaniswa kwe-Plasma kukhiqiza imithi “esekela impilo”
Ekhasini 6 leJanuwari 15, 1995 INqabayokulinda, ithi, "... uMenzi wethu uyakwenqabela ukusetshenziswa kwegazi ukusekela impilo." Kuyi-Nqabayokulinda kaJuni 15, 2000, sifunda lokhu: “… uma kukhulunywa ngezingxenyana zezinto eziyinhloko, umKristu ngamunye, ngemuva kokuzindla ngokucophelela nangokuthandaza, kufanele azenzele isinqumo ngenhlonipho.” Ngokusobala, umbono we-Watch Tower Society ngokuthi “uMenzi wethu” awenqabeli izingxenyana zezinto eziyinhloko ngoba azisekeli impilo.
Njengoba izingxenyana ze-plasma ezivunyelwe zithathwa njenge-protease inhibitors; i-albhamuin EPO; i-hemoglobin; ama-serum egazi; ama-immunoglobulin (gammaglobulins); Amalungiselelo e-immunoglobulin akhethekile; I-hepatitis B i-Immunoglobulin; I-Tetanus Immunoglobulin 250 IE; I-Anti Rhesus (D) I-Immunoglobulin, kanye nokwelashwa kwe-hemophiliac (izinto ezijiyisayo ze-VIII ne-IX) zivame ukwedlula ukuthathwa ukuxhasa impilo, lokhu kucabanga kuyaphikisana futhi kuyinqaba. (Bheka umbhalo osekugcineni uchaza ukuthi le mikhiqizo isetshenziselwe ziphi izimo zezokwelapha.)
I- “Plasma,” uketshezi olungenamabala, ingesinye sezingxenye zegazi “ezinkulu” oFakazi BakaJehova abavunyelwe ukuzithatha. Inamaprotheni ahlukene angaphezu kwe-200, angahlukaniswa kabanzi ngama-albhamuin, ama-immunoglobulin, ama-protein kanye namanye amaprotheni anjenge-proteinase inhibitors. Iningi le-plasma licutshungulwa libe yimikhiqizo ye-plasma, eyaziwa nangokuthi yimithi eyenziwe nge-plasma. OFakazi BakaJehova bavunyelwe ukuthatha i-Cryoprecipitate antihemophilic factor (AHF), umuthi obaluleke kakhulu ohlukaniswe nge-plasma futhi ophatha izifo ezihlasela igazi.
Ngekhulu leshumi nesishiyagalolunye, inzalo engxenyeni 'yegazi' yanda ngokushesha. Kubonakale kungumthombo wezinto ezintsha, ezingaba kude kuzo. Ngo-1888, usosayensi waseJalimane uHofmeister wanyathelisa izindatshana eziphathelene nokuziphatha nokuthambekela kwamaprotheni egazi. Esebenzisa i-ammonium sulphate, uHofmeister wahlukanisa izingxenyana azibiza ngama-albhamu kanye nama-globulins. Umgomo wendlela yakhe ehlukanisayo yokuhlukanisa imvula usasebenza nanamuhla.
Ngesikhathi seMpi Yesibili Yomhlaba, usokhemisi wezokwelapha u-Edwin Cohn waqamba indlela i-plasma engahlukaniswa ngayo ngamaqhezu ahlukene. Amaprotheni e-Plasma anjenge-albhamuin angatholakala ngefomu elihlanganisiwe. Yize abacwaningi abahlukahlukene kamuva beyishintsha le nqubo yokuhlukanisa, inqubo yokuqala kaCohn isasebenza ezindaweni eziningi. Ngemuva kwempi, intuthuko entsha yathola umfutho.
Ngo-1964, i-American Judith Pool yaseMelika yathola ngengozi ukuthi uma i-plasma eqandisiwe igcwala kancane kancane emazingeni okushisa angaphezulu nje kweqhwa, kufakwa idiphozithi equkethe inani elikhulu le-VIII. Ukutholwa kwalokhu 'cryoprecipitate' njengendlela yokuthola i-factor VIII kwakuyimpumelelo yokwelashwa kweziguli ezinesifo sokuqina kwegazi hemophilia A. Namuhla, inani elikhulu lamaprotheni e-plasma lingahlukaniswa futhi isetshenziswe njengomuthi.
Ngaphezu kwalokho, ngemuva kwamafomu we-cryoprecipitate, iprotheni ye-plasma, i-cryosupernatant, ihlukana nayo. Ngokubambisana, i-cryoprecipitate, ezungeze u-1% we-plasma, ne-cryosupernatant, ezungeze ama-99% we-plasma, isiyonke ibe yi-plasma. Abaholi boFakazi bathi oFakazi abayiguli i-plasma, kepha abanayo ukuthi yomibili imikhiqizo iqukethe ama-globulins (wonke amaprotheni ku-plasma) ane-cryoprecipirate aqukethe ukugxila kwamaprotheni amaningi, kanye ne-cryosupernatant equkethe okuncane. Ngakho-ke, ngamunye wale mikhiqizo uyi-plasma ngoba womabili aqukethe, ngezinga elithile, izakhi ezifanayo. Futhi bobabili babizwa nge-plasma ezincwadini zezokwelapha nangabasebenzi bezokwelapha.
Noma oFakazi bavunyelwe ukuthatha eyodwa noma enye yale mikhiqizo emibili ebalulekile yegazi, noma “izingxenyana,” i-cryoprecipitate noma i-cryosupernatant, bobabili abahlukaniswe nge-plasma, ngokuvamile abazi nge-cryosupernatant ngoba le nto enamanzi ne-99% yomkhiqizo ayisiwo ezibhalwe ezincwadini ze-Watch Tower; ngakho-ke, oFakazi BakaJehova abazi ukuthi kuvunyelwe ngoba akukho ohlwini oluvumelekile kodwa ucingo oluya eBethel luzoveza ukuthi ukulithatha “kuyindaba kanembeza. Kuyadabukisa ukusho ukuthi, akuvumelekile ukuthi ama-Liaison Teams Esibhedlela akhulume nge-cryosupernatant kodokotela, noma ezigulini, ngaphandle kokuthi imindeni yeziguli noma yeziguli ibuza ngalo mkhiqizo. Ngaphezu kwalokho, odokotela abavame ukuphakamisa i-cryosupernatant njengomuthi wokuzikhethela wesimo esifana nokuthi, ngokwesibonelo, i-Refractory Hemolytic Uremic Syndrome, esisongela impilo, lapho isiguli sesimemezele ukusetshenziswa kwe-plasma emikhawulweni. Uma kungekho lwazi mayelana nalo muthi osindisa impilo wenziwa isiguli¸ angasenza kanjani leso sinqumo “esinolwazi”? Lokhu kufana nesigebengu uma kuphumela ekufeni.
Odokotela noFakazi BakaJehova kwenqatshelwa igazi
Umqondisi Kazwelonke Wabaqondisi BoFakazi BakaJehova eCanada, uWarren Shew qeta, wathi: “OFakazi BakaJehova babhekene nezinkinga ezimbalwa futhi ezimbalwa zokuthola ukwelashwa okuvumelana nonembeza babo abangamaKristu.”
Kungani oFakazi BakaJehova “behlangabezana nezinkinga ezimbalwa futhi ezimbalwa zokuthola ukwelashwa…”? Kulula impela-ke oFakazi sebevunyelwe ukuthola yonke ingxenye yegazi noma “ingxenye” eyodwa abaholi babo abayibheka njenge “mncane” noma “yesibili” njengendaba kanembeza wabo okungeyona eyezingxenye abazibheka njenge “ezinkulu” noma “eziphambili. Kodwa-ke, uma zihlanganisiwe, zonke izingxenye zegazi "lesibili" zilingana negazi lonke.
Njengoba omunye owake waba uFakazi waphawula: “Kukhona ingxenye eyodwa yegazi elincane engeyona ethize ohlwini lwe-Watch Tower yemikhiqizo“ evunyelwe unembeza ”futhi amanzi. Kayikho ingxenye yokumpompela kwegazi lonke okungenzeka ukuthi oFakazi BakaJehova abakwamukeli inqobo nje uma ihlukaniswe kuqala. Ngenxa yokungaqondakali kwabazibona abalungile — abagcwele imithetho — i-Watch Tower Society, okuwukuphela kwento edidayo yikuthi abakwazi ukubathatha bonke ngasikhathi sinye noma bendawonye. ”
Njengoba oFakazi BakaJehova bezithatha zonke lezi zingxenye ezincane noma zesibili ngokwahlukana, ezihlanganisa igazi lonke, kungani kufanele kube nenkinga yokuthola ukwelashwa okuvumelana nonembeza babo abangamaKristu?
UMnu Shewtima usho ukuthi abasenazo izinkinga eziningi ngokuvinjwa kwegazi ngoba insimu yezokwelapha ihlonipha ukuma okusekelwe eBhayibhelini, kodwa empeleni yingoba bathatha igazi. Lokhu kususa oFakazi emgodleni bese kusindisa lo msebenzi wezokwelapha ekutheni bathole imiyalo yenkantolo yezingane ezingaphansi kweminyaka.
Kuliqiniso, kukhona okuhlukile emthethweni njengokuthulwa kokopha okukhulu futhi yingakho uShewindows athi, "zimbalwa futhi zimbalwa izinkinga" manje.
Njengoba kunokuvinjelwa okuphelele kwe-Watch Tower ekuthatheni i-plasma, amaplatelet, namaseli amhlophe noma abomvu, kuvela ukuthi odokotela abahlakaniphile banikeza iziguli ezingoFakazi izingxenyana zalezi zingxenye noma nini lapho kungenzeka. Ngenxa yalokho, kunezinkinga ezimbalwa futhi ezimbalwa zokutholela ukwelashwa koFakazi BakaJehova. Futhi, ngaphezu kwalokho, aboFakazi bakholelwa ukuthi bathobela umthetho kaNkulunkulu ngegazi.
UShewtima uthe umsebenzi wezokwelapha uya ngokuya uzimisele ukulandela izinkolelo zoFakazi, njll., Kusobala-ke, kungani-oFakazi BakaJehova abanazo izinkinga ngomsebenzi wezokwelapha ngoba umsebenzi wezokwelapha ubanikeza igazi ngendlela yezingxenyana, , ngeshwa, yindlela igazi elivame ukunikezwa ngayo kulezi zinsuku.
Bona inkohliso ngemuva kwezitatimende zabameli boFakazi? Lokhu kwenzeka kanjani kungakhathalekile ukuthi le ndaba ingamagazi noma okunye ukufundisa okudumazayo kukaFakazi. Imibuzo ayikaze iphendulwe ngokweqiniso ngabamele be-Watch Tower. Amagama abo ahlale enzelwe ukukhohlisa abezindaba, umfundi, noma umlaleli. Imsulwa futhi imane nje, kungama-semantics, futhi kwenziwa ukuphatha loludaba ukuze lubathole.
Ukuxosha ukuvinjelwa kwegazi
“Izitini eyodwa ngasikhathi sinye, izakhamizi zami ezithandekayo, isitini esisodwa ngasikhathi” kusho uMbusi WaseRoma uHadrian ekwakhiweni kabusha kweRoma! Umqondo we-single-at-a-time nawo uyiqiniso ekuqedweni kwegazi kwe-Watch Tower. Eminyakeni eyishumi nesithupha edlule, oFakazi bebengacabangi emaphusheni abo aqatha ukuthi bangaki isitini esakhiweni senkolo yabo nemfundiso yegazi abaye badlula ngendlela. Imikhuba eminingi kwakuyizinto zakudala ezazenziwe uFreddy Franz i-Watch Tower Society eye yaziphonsa kancane kancane, kanti bambalwa abangoFakazi ababahlakaniphile.
Ngokuqondene nemfundiso enamaphutha yokuvinjelwa kwegazi enomlando, kuthiwani ngoFakazi BakaJehova abangakaze batshelwe ngokusemthethweni ukuthi i-hemoglobin encane yamukelekile ngesinqumo somuntu siqu? Isimemezelo sokugcina esisemthethweni esivela kwi-Watch Tower ezincwadini zayo ezijwayelekile sasithi i-hemoglobin yayingavunyelwe ngumKristu weqiniso. Lokhu bekuphikisana nemagazini eminingi yezokwelapha efundisayo ebikhipha imiphumela yoFakazi BakaJehova abasindile ngemuva kokuthola i-hemoglobin ngosizo lweKomiti Yabo Yokubonisana Nezibhedlela. Lokhu kwabangela ukuthi uMnyango Wokubhala waseBethel usilungise ngokushesha leso simo ngokubhala u-Agasti 2006 I-Phaphama! ikhava yochungechunge lwegazi elathi futhi ngokusemthethweni latshela abalandeli ukuthi hemoglobin ivunyelwe ngesinqumo somuntu siqu.
Ngenxa yalokho, abagxeki be-Watch Tower kufanele baqhubeke nokubekezela, ngoba uma oFakazi BakaJehova bengaba yisibonelo kunoma yisiphi isibonelo, khona-ke inkolelo yabo yamanje yokuvinjelwa kwegazi iyoba ukulahlwa, umlando wasendulo wokwenqatshelwa kwegazi-ukukholelwa.
Esikhathini esifushane esidlule ngasho obala ebhodini lezingxoxo nge-Intanethi: “I-Watch Tower yenze izinyathelo ezimbalwa ngendlela efanele ngoba iqiniso lokuthi ukumpompela igazi manje sekuyindaba kanembeza.”
Igama eliyisihluthulelo engilisebenzisile kwaba “esidlangalaleni” ngoba kuze kube manje akukho ndawo etholakalayo noma ebhalwe noma yaziswa koFakazi BakaJehova ukuthi ukuthatha igazi kuyindaba kanembeza. Noma kunjalo, iminyaka eminingi, abamele i-Watch Tower bebelokhu bephikisana ngokuphumelelayo ezinkantolo ezithile zamazwe, naseziphathimandla zikahulumeni ukuthi ukuma kukahulumeni okwenqatshelwa kwegazi “kuyindaba yomuntu ngamunye”.
Isifiso esiyisisekelo sabaholi be-Watch Tower ukuthola ukwamukelwa njengenkolo ehlelekile emazweni lapho kungenjalo manje, noma ukubambelela lapho kunikezwe khona. Ukutshela izinkantolo nezizwe emhlabeni wonke ukuthi oFakazi BakaJehova basebenzisa onembeza babo lapho bekhetha ukungayi ukumpontshelwa igazi sekuyindaba yama-semantics. Kusetshenziswa ulimi ukufeza umphumela ofiselekayo wokuthi ukugcina i-Watch Tower ingasolwa ngokwephulwa kwamalungelo abantu uma ilunga lisuswa ekuhlanganyeleni futhi livinjelwa ukuthatha ukumpontshelwa, lapho kulo lonke elaseYurophu nakwamanye amazwe ngaphandle kwe-United States, amalungelo abantu izingqinamba zibaluleke kakhulu. Iningi lababekhona ngaphambili labadumala lapho befunda isinqumo seNkantolo YaseYurophu Yamalungelo Abantu ka-2010 (bheka isiphetho), kodwa kulesinqumo leso kuyisixwayiso esiyisisekelo:
Isiguli esikwazi ukusebenza kahle sikhululekile ukunquma… ukungatofelwa igazi. Kodwa-ke, ukuze le nkululeko ibe nenjongo, iziguli kumele zibe nelungelo lokwenza ukukhetha okuvumelana nemibono yazo namagugu, kungakhathalekile ukuthi ukukhetha okunjalo kungaqondakali, kungahlakaniphile noma kungenamqondo kwabanye.
Manje i-Watch Tower kufanele icophelele kakhulu eYurophu naseRussia ukuthi inganiki i-ECHR noma yisiphi isizathu sokuguqula isinqumo sabo uma kunobufakazi bokuphoqelela hhayi inkululeko kanembeza yokwenqaba igazi.
Lesi simangalo “sokwazi” esenziwe i-Watch Tower siyisinyathelo esiqonde ngqo, kepha lokho akusona isincomo. Ngemuva kokungena ngendlela embi ngokubanga ukubulawa kwamashumi ezinkulungwane zamakholwa eminyakeni engamashumi ayisithupha nanhlanu edlule, i-Watch Tower Corporation ebiza amadola ayisigidigidi izama ukuzikhipha phakathi kwedwala nendawo enzima futhi hhayi ukuwa ngenkathi ukuzama. INdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova, abaholi bayo bezinkampani, kanye nabameli bayazi ukuthi imfundiso yenkolo yabo enamaphutha nebulalayo yokuvinjwa kwegazi ayinakuqedwa ngokugwazwa kwepeni, kodwa kancane kancane lapho beya khona manje, okuvumela oFakazi ukuba bamukele noma ngabe yiliphi igazi njengokulashwa kwemithi odokotela abalibhalayo ukusindisa izimpilo zabo, kepha, ngasikhathi sinye, bakholelwa ukuthi abakwephuli ukwenqatshelwa kwegazi kwe-Watch Tower. Ngempela, oFakazi manje bangaba nazo zombili izindlela.
Umgxeki wesikhathi eside, uDkt O. Muramoto, uphawule ngokufakwa kwe-Watch Tower “… ekuthatheni izinqumo kwamalungu ayo mayelana nokunakekelwa kwezokwelapha ngokuhlongoza“ ukuthi inhlangano engokwenkolo yoFakazi yamukele “ukungaceli. 't-tell' inqubomgomo, eqinisekisa ama-JWs ukuthi ngeke abuzwe noma aphoqeleke ukuthi aveze imininingwane yezokwelapha uqobo, komunye nomunye noma enhlanganweni yesonto. ”
Okwamanje, akukho nqobo ethi "ungaceli, ungasho" inqubomgomo ye-Watch Tower isebenza. Kodwa-ke, wona kanye la magama asetshenziswa ngumdala wangaphambili kimi ngenkambo yakamuva ye-Watch Tower yokuyala abadala ukuthi bangafuni abanye oFakazi ngemuva kokuhlinzwa ukuze babuze ukuthi igazi lithathiwe yini. Futhi akukho simemezelo sanoma yiluphi uhlobo okufanele senziwe uma uFakazi ezizwa ezisola ngokwamukela ngasese igazi futhi avume kubadala, kodwa kufanele athethelelwe.
"Umkhulumeli we-Watch Tower uDonald T. Ridley uthi abadala noma amalungu e-HLC abayalwa noma bagqugquzelwe ukuthi bathathe izinqumo zokunakekelwa kweziguli ezingoFakazi futhi bangazibandakanyi nasezibhedlela ngaphandle kokuba iziguli zifuna usizo lwabo."
Amagama asetshenziswe ngumdala athi, "Kunjengokungathi kunenqubomgomo 'ongayiceli, ongayitsheli' ukusebenza." Yize abadala benza imisebenzi yabo maqondana namakhadi wegazi, uthe, iningi labadala liyadeneka ukuba “ngabenzi” bokunqatshelwa kwegazi abangaqondi manje njengoba kwamukeleka ukuthola cishe noma yimuphi “umkhiqizo wegazi” njengomuthi.
Ngokuvamile ukukhuluma igazi njengomuthi kwamukelwa oFakazi ababuzwa imibuzo embalwa, yize kukhona izimfundiso ezimbalwa “zokuma okuqinile,” ngokuvamile oFakazi asebekhulile, labo abangeke bayemukele imikhiqizo yegazi — “Izithelo zika-ketshezi wokuphila”—Ngenxa yokufaniswa kwabo nokudla “ukudla” igazi "Uketshezi lokuphila."
Njengoba amalunga amadala eshona, abakhona, abancane, abathanda kakhulu iqembu bazokwenza noma yini abayifunayo kulolu daba, futhi akekho noyedwa oyolucabanga. Esikhathini esiningi lesi sizukulwane esisha soFakazi (iningi labazelwe) asikwazi ukuvikela izinkolelo ezilula kakhulu zenkolo yabo futhi ngokuqinisekile ngeke sinikeze izimpilo zabo ngenxa yemfundiso ethile abangayiqondi noma abanendaba nokuyiqonda. Kuyiqiniso ukuthi onembeza abengeziwe boFakazi abakholelwa emfundisweni yenhlangano yabo ebulala igazi futhi bavuma ngasese noma yini umkhiqizo wegazi, noma igazi eliphelele, uma udokotela wabo ekutusa futhi uma kusho ukuthi bazohlala bephila.
Konke kuhambisana nalokhu: Ukusuka kolunye uhlangothi lomlomo wabaholi be-Watch Tower ngokunganqikazi baqhubeke nokwenqabela umhlambi ukwamukela igazi lonke noma izakhi ezine “eziyinhloko” (ezine-tacit shuning), ukuwenza ubukeke sengathi awekho ngandlela thile bebuya kude nokuvinjwa kwabo kwemfundiso yenkolo eyimpikiswano.
Ngaphandle kolunye uhlangothi lomlomo wabo ngenkohliso banikeza umuthi olungiselelwe ngaphandle kwegazi; vuma umuthi osuselwa ku-plasma empeleni oyiplasma; zitshela izinkantolo nohulumeni ukuthi ukuthatha igazi kuyindaba yamalungu abo uma kungenjalo; ukuyeke ukuphenya ukuthi othile odinga igazi ulamukele yini; basuse labo abathatha igazi uma bethi "ngiyaxolisa"; Dweba isitatimende sokuyekethisa kuhulumeni waseBulgaria, "… ukuhlinzeka ngokuthi amalungu kufanele azikhethele ngokukhululekile kulolo daba nezingane zawo, ngaphandle kokulawulwa noma ukujeziswa yinhlangano," futhi avumele abazali bavume ukwelashwa okungenza faka igazi, kodwa ukwenza lokho ngendlela yokuthi abazali bangavunyelwa ukwenqatshwa (ukugwetshwa) yibandla ngoba lokho “ngeke kubhekwe yibandla njengesehla,” ngaleyo ndlela bezivikele ekumangaleleni kokwephula amalungelo abantu.
Ngokubona kwami, ukusuka lapho le mfundiso yobusuku ithatha khona, uma i-Watch Tower idlala amakhadi ayo ngqo, ibulawa yile nkolelo-mbumbulu — hhayi ama-pathogens egazi abulalayo ayikhomba umunwe ngaso sonke isikhathi — iyoba yinto yesikhathi esedlule. Maduze nje, oFakazi BakaJehova bazobe bengaphandle kogwando oluvinjelwe igazi futhi bayoba kanjalo ne-Watch Tower Society, futhi, uma iqiniso litshelwa, yilokho abathatha izinqumo kanzima abasebenza endlunkulu abakukhathalelayo ngempela.
UBarbara J Anderson-Uphinde Waphindwa Ngemvume
← Phishekela Ukuthula Ngokulwa NomonaOkwenza Ngashiya Inhlangano Ye-Watchtower Ngemuva Kweminyaka Engama-61 Yenkonzo Ezinikele →
Ubani? (Umhlambi omncane / Enye Izimvu)
Ingabe OFakazi BakaJehova Banecala Legazi Ngoba Bavimbela Ukumpontshelwa Igazi?
Lesi isikhathi esifanele kimi njengoba bengilokhu ngifuna impendulo ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ngezizathu zomuntu siqu. Ngiyabonga u-Eric ngokungazisa ngalendatshana enhle kakhulu kanye nabanye. Bekufanele ngabe ngazi, amaPuzzle waseBeroean ngabe asimbozile.
Kuzo zonke izimfundiso ezingafani noFakazi BakaJehova, inqubomgomo yokumpontshelwa igazi kungenzeka yiyo emangalelwa kakhulu ngokomzwelo. Eminyakeni edlule, omunye ebesebenza naye obengumphathi wesibhedlela ungitshele ukuthi ubhekene nesimo sengane ye-JW esidinga ukumpontshelwa igazi, kepha abazali benqaba ukugunyaza eyodwa. Kwakusobala ukuthi lokhu kwakuyinkinga enkulu yokuziphatha futhi kwamthinta iminyaka eyalandela. Umbuzo osobala, njengoba ngiwuqonda, wehlela ukuthi ukumpompela igazi kuyafana nokudla igazi. Leyo yinto engingafuni ukuyinquma omunye umuntu. Kuyinto... Funda kabanzi "
Ukuzibuza ukuthi ngabe unguBarbara Anderson owakha i-Silent Lambs iwebhusayithi, angikaze ngibe lapho iminyaka eminingi (bekukhona abanukubezi abayisihlanu emahholo ama-5 engihambele kuyo ngeke bayikhulume leyo ndaba noma ngingaba nayo kuleyo sayithi iminyaka eminingi edlule) Ngibona isayithi lisaqhubeka futhi lisebenza.
Phendula ku Izinkondlo Zesizulu
Umlobi walokhu kuthunyelwa, uBarbara J Anderson, wayengumdididali we-Silent Lambs isayithi futhi ukunyakaza, futhi wayehlotshaniswa nayo kusukela ngo-2000 kuya ku-2002, lapho lowo mzamo uthola ukunakwa kwezwe ngohlelo lwe-NBC Dateline.
Lowo mbukiso uyatholakala ku-YouTube ku- https://www.youtube.com/watch?v=fJq1XtJNzA8